Kooxda Real Madrid oo iska diiday fursad ay kula saxiixan kartay laacibka Man United ee Alexis Sanchez – Gool FM
(Madrid) 24 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa hoos u dhigtay fursad ay Manchester United kagala soo saxiixan kartay xiddigeeda Alexis Sanchez sida wararku ay sheegayaan.
Red Devils ayaa lagu soo waramayaa inay raadineyso inay weeraryahanka reer Chile iska iibiso, maadaama uu mushahar ahaan uga qaadanayo 500,000 oo gini isbuucii, taasoo keentay inay wadahadal la galaan ciyaartoyda kale.
Sanchez ayaa noqday mid flop ah tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay garoonka Old Trafford, isagoo qeyb ka haa heshiis uu Henrik Mkhitaryan ku aaday dhinaca Gunners suuqa bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii, waxaana uu Alexis dhaliyey kaliya saddex gool oo Premier League 29 kulan oo uu saftay tan iyo markaas.
Warsidaha Don Balon ayaa soo jeedinaya in Real Madrid ay ka mid tahay kooxaha la soo xiriiray Man United si ay isugu dayaan inay soo iibsadaan 30-sano jirkaan, laakiin Los Blancos ayaan doonayn inay bixiso adduun dhan 68.5 milyan oo gini oo ay siiso kooxda ka dhisan Premier League.
Macallin Zinedine Zidane ayaa sheegay inaysan jirin wax sabab ah oo uu shaxdiisa ugu soo darsado Sanchez maadaama uusan waxba ka keeneynin safkiisa hore ee weerarka, iyadoo sidoo kale inuu horay ugu soo ciyaaray kooxda Barcelona aysan caawin doonin inuu ka hor tago taageerayaashiisii hore.
Man United ayey ka go’antahay inay iska iibiso xiddiga xulka qaranka Chile ee Sanchez ama ugu yaraan ay amaah ku dirto, waxaana ay bedelkiisa u aragtaa laacibka kooxda PSV Eindhoven ee Hirving Lozano.